Jereo ny tanàna kelin'i Masca ao Tenerife | Vaovao momba ny dia
Inona no ho hita any Masca, Tenerife
La Nosy Tenerife, miorina ao amin'ny Nosy Canary Izy io dia iray amin'ireo mpizahatany indrindra ary ao no ahitantsika ireo toerana mahaliana samihafa. Na dia iray amin'ireo manintona mahaliana azy aza ny torapasika, raha mandeha any amin'ity nosy ity isika dia tsy hadino ny fotoana hikaroham-baovao amin'ireo toerana voajanahary mampiavaka azy toy ny valan-javaboahary. Izany no antony aingam-panahy tsara handehanana mitsangatsangana any amin'ny faritr'i Masca any Tenerife.
La Masca area dia trano fiompiana any amin'ny avaratra andrefan'ny nosy, ao anatin'ny valan-javaboary ambanivohitra Teno. Manana ivon-toerana maro isan-karazany izy ary manana toerana voajanahary miavaka ihany koa, toa ny lohasaha sy hantsam-bato izay tsy tazana ny ranomasina, ka izany no maha toerana fizahan-tany ho an'ny olona maro izay mitady zavatra any amin'ilay nosy any ankoatry ny morontsiraka.
1 Jereo Masca ao Tenerife
2 Ahoana ny fomba hahatongavana any Masca
3 Ny tanànan'i Masca
4 Làlana fitsangantsanganana any Masca
Jereo Masca ao Tenerife
Masca dia tanàna kely iray ao amin'ny tanànan'i Buenavista del Norte, ao amin'ny faritanin'i Santa Cruz de Tenerife, any avaratra andrefan'ny nosy. Ny trano fiompiana dia fananana ankehitriny amin'ny fananana tombotsoan'ny kolontsaina miaraka amin'ny sandan'ny toerana manan-tantara, ka izany no mahatonga azy io mihoatra ny làlana fitsangantsanganana. Momba izany iraika ambin'ny folo kilometatra miala ny atin'ny tanànan'ny Buenavista del Norte ary amin'ny faritra avo, ao amin'ny Teno Massif ao anatin'ny Valan-javaboary Teno Rural. Ny massif dia iray amin'ireo formations rock telo izay nisondrotra ny nosy Tenerife. Androany dia manana hantsam-bato sy lohasaha mitondra any amin'ny hantsana malaza Los Gigantes Cliff, fantatry ny rehetra mitsidika ny nosy, satria izy ireo dia tsy maintsy jerena raha mahatalanjona tokoa izy ireo. Ny mety tsy fantatrao dia ny hoe raha midina amin'ny tany ianao dia hahita an'ity faritra ity, izay misy tanàna kely ary làlana fitsangantsanganana tena mahaliana.
Ao amin'io Hita ireo formations basalt park any ambanivohitra manan-danja lehibe. Misy ihany koa ny fahasamihafana lehibe sy ny ala laurel izay hita ao amin'ny faritr'i Macaronesia izay misy ireo nosy Atlantika hafa toa an'i Madeira na Cape Verde. Izy io dia karazana ala tropikaly mando izay any amin'ny faritra sasany amin'ireo nosy ireo ihany no misy azy. Hita ihany koa ny taolan'ny arkeolojika an'ny mponina ao Guanche, ireo aborigine an'ny nosy, izay manondro fa efa faritra lehibe io taonjato maro lasa izay.
Ahoana ny fomba hahatongavana any Masca
Raha hanao ny zotra Masca dia azo atao ataovy amin'ny orinasa samihafa manao fitsangatsanganana. Ny sasany manao fitetezam-paritany amin'ny jeep na fiara hafa ary azo atao koa ny manao izany amin'ny fiara nohofana raha azo atao. Ny mety hafa dia ny mitondra fiara mankany amin'ny tanànan'i Los Gigantes, izay anaovana dia an-tsambo maro hijerena cetaceans ary hahatratra ny moron-dranomasina amin'ny hantsana any Masca. Ny zotra dia miainga avy amin'ny morontsiraka mankamin'ny tanàna kelin'i Masca, mankamin'ny tanàna kely, amin'ny làlan-davitra iray izay maharitra eo anelanelan'ny telo sy efatra ora eo anelanelan'ny hantsana.
Ny tanànan'i Masca
Raha tonga amin'izany isika tanàna kely any an-tendrombohitra dia tsy maintsy efa zatra ny lalana miaraka amin'ny fiolahana maro, satria mahazatra an'io faritra io izy ireo. Ao an-tanàna ianao dia afaka mahita palma sy lohasaha daty, miaraka amin'ireo trano kely izay mampiseho amintsika ny maritrano mahazatra an'ireo nosy, miaraka amin'ny vatan-kazo sy hazo. Ity tanàna ity dia toerana adino izay nilazana fa niafina ny piraty noho ny jeografia. Tanàna mangina izy io ary zara raha misy mahita, afa-tsy ny fomban'ny tranony sy ny fomba fijery ahafahanao maka sary tsara tarehy. Io no teboka fanombohan'ny làlana fitsangatsanganana mankany amin'ny moron-dranomasina, ka mora amin'izao fotoana izao ny fisian'ny fivezivezena mpizahatany eto amin'ity faritra ity, satria misy fitsangatsanganana vitsivitsy.
Làlana fitsangantsanganana any Masca
Ny lalan'ny dia an-tongotra dia azo atao amin'ny fomba maro. Raha ataontsika mandroso sy miverina dia maharitra enina ora eo ho eo, noho izany dia mila mandany fotoana isika ary milamina ihany koa amin'ny fomba iray. Etsy ankilany, afaka miala eo amoron-dranomasina isika raha mandeha sambo ka mankany amin'ny tanàna na miala amin'ny tanàna kely mankany amoron-dranomasina. Ho an'ity karazana làlana ity dia tsy maintsy manana sambo na fiara manofa miandry isika. Midina mamaky ny tanàna mandalo ny Church of the Immaculate Conception amin'ny làlan'i Morro Catana. Rehefa tonga eo ianao dia misy lalana misy zotra misy eo amin'ny ankavia. Mitohy ny lalana mamaky ny tanimboly taloha sy ny faritra misy voninkazo tera-tany. Hanohy handeha mamaky ny faritra misy ny lohasaha izahay mandra-pahatongantsika any amoron-dranomasin'i Masca, toerana izay fiandrasan'ny sambo hiverina an-dranomasina mankany Los Gigantes, mankafy ny tontolon'ny hantsana sy ny vondron-trondro feso matetika.
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Vaovao momba ny dia » General » Inona no ho hita any Masca, Tenerife
Menorca miaraka amin'ny ankizy
Fomba amam-panao sy fomban-drazana an'ny Masai